Fanirisoa Ernaivo : Hanome vahana ny « tsimatimanota » -
AccueilRaharaham-pirenenaFanirisoa Ernaivo : Hanome vahana ny « tsimatimanota »
07/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ireo izay tsy nanaraka ny raharaham-pirenena tato anatin’ny roa taona ihany angamba no taitra tamin’ny filatsahan-kofidian’ny filohan’ny SMM amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Efa nazava hatrany am-boalohany fa misy ambadika politika ireny fihetsika nasehony ireny, ary misy mpamatsy vola rahateo koa.
Nanambara ny filatsahan-kofidiany amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny filohan’ny sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara, Fanirisoa Ernaivo. Izany hoe, hanampy isa ireo kandida avy amin’ny fanoherana ary mihevitra ny hampizarazara ny vaton’ny mpifidy mandritra ny fihodinana voalohany, hananan’i Andry Rajoelina tombony bebe kokoa eo amin’ny isan-jato. Efa nazava hatrany am-boalohany fa misy ambadika politika ireny fihetsiketsehana maro nataon’ny filohan’ny SMM tato anatin’ny roa taona ireny.
Endriky ny Fitsarana
Nampiasain’i Fanirisoa Ernaivo ho amin’ny kaontin’i Andry Rajoelina sy ny mpanohitra ny maha filohan’ny sendikan’ny Fianakaviamben’ny Mpitsara ny tenany. Mampanahy ihany anefa izany manoloana ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena, indrindra ny endriky ny Fitsarana eo imason’ny olom-pirenena izay hita fa somary malomaloka ihany. Voateny matetika amin’ny resaka kolikoly ny tontolon’ny Fitsarana eto amintsika, voateny matetika ihany koa ny fitanilana rehefa misy didim-pitsarana mivoaka, ary ny tena loza dia ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana noho ny antony maro, heverina ho fototr’ireny fitsaram-bahoaka ireny na dia tsy marina zato isan-jato aza izany.
Hanatsara ny endriky ny Fitsarana ve izao filatsahan-kofidian’ny filohan’ny SMM izao ka hamerina ny fitokisan’ny vahoaka amin’ireo rafi-pitsarana eto amintsika?
Vola avy aiza?
Eo indrindra no fanontaniana goavana satria rehefa miresaka fifidianana aloha hatramin’ny androany dia tsy afa-miala amin’ny resa-bola. Avy aiza araka izany ny loharanom-bola ho entin’ny filohan’ny SMM hiatrika izany fifidianana izany, raha tsy hiresaka fotsiny afa-tsy ny vola 250 Tapitrisa fmg antoka tsy maintsy aloan’ny kandidà? Ankoatra izany ny fandaniana sy ny vola be ilaina amin’ny propagandy toa ny “tee-shirt”, ny vola ho an’ny artista, ny vola hozarazaraina etsy sy eroa, sns. Amina miliara, ampolony miliara mihitsy no ilaina amina fifidianana filoham-pirenena izany, koa izay indrindra no ametrahana ny fanontaniana manao hoe: « vola avy aiza? ».
Loharanom-bola roa ihany no azon’ny filohan’ny SMM horesahina raha vonona hamaly io fanontaniana io ny tenany: na vola avy aminy manokana izay tsy maintsy hitondrany fanazavana ny fiaviany sy ny fomba nananany izany vola be izany na manana mpamatsy vola ny tenany. Ity faharoa no tena zava-doza araka ny tenin’ny Soratra Masina nampiasain’ny filohan’ny SMM manao hoe: “Estera 8:6 Fa hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko?”. Efa manambara sahady ny fisian’ny “tsimatimanota” tokoa mantsy izany amin’ny maha Mpitsara ny tenany. Izany hoe, efa ho isan’ireo olona na andian’olona tsy azo atao na inona na inona mihitsy izany ireo mpamatsy vola an’i Fanirisoa Ernaivo ireo raha toa ka ny tenany na izay kandidà hotohanany amin’ny fihodinana faharoa no ho lany filoham-pirenena. Tandindonin-doza tanteraka araka izany ny firenena manoloana izao fihetsiky ny filohan’ny sendikan’ny Fianakaviamben’ny Mpitsara izao.